Kacha mma uwe na -apịachi igwe na -emepụta ihe na ụlọ ọrụ | UBL
1. Usoro akụrụngwa a nwere ihe nlereanya bụ isi FC-M152A, nke enwere ike iji akwa akwa na aka ekpe ozugbo, tụgharịa ogologo otu ma ọ bụ ugboro abụọ, na-enye akpa rọba akpaka na akpaaka.
2. Enwere ike ịgbakwunye ihe ndị na -arụ ọrụ dị ka ndị a: akụrụngwa akara akpaghị aka na -ekpo ọkụ, ihe nrapado akpaka na -akpachi akpaka, ihe nchịkọta akpaka. Enwere ike ijikọta ihe ndị ahụ dịka ihe achọrọ si dị.
2. Enwere ike ịgbakwunye ihe ndị na -arụ ọrụ dị ka ndị a: akụrụngwa akara akpaaka na -akpaghị aka, gluu akpaka na -adọba ihe akara, ihe nchịkọta akpaka.
3. Emebere akụkụ ọ bụla nke akụrụngwa dịka ọsọ chọrọ 600PCS /H. Ngwakọta ọ bụla nwere ike nweta ọsọ a na ọrụ niile.
4. Ntinye ntinye nke ngwaọrụ ahụ bụ ihe mmetụ ihuenyo mmetụ aka, nke nwere ike ịchekwa ụdị uwe akwa 99, akpa akpa, akara na ịkpakọba ihe maka nhọrọ dị mfe.
1, nhazi akụrụngwa akụrụngwa bụ sayensị, dị mfe, ntụkwasị obi dị elu.
2, ụdị ihe eji arụ ọrụ yana ngwakọta ihe ọ bụla dabara adaba, na njikọta ọ bụla, akụrụngwa nwere ike bụrụ ogo na -apụ apụ n'ime mita 2 nke ahụ ụgbọ njem, ọkwa mbuli elu nke ụlọ ọrụ nwere ike ibuga elu na ala.
Uwe ọkụ, dị ka T-shirts, uwe elu Polo, uwe elu nkịtị, wdg
Uwe dị mkpa na -apịaji, akpa, ịdọka, akara na ịkpakọba
Ụdị FC-M152A, enwere ike ịhazi agba igwe
Ụdị uwe T-uwe elu, uwe elu Polo, uwe akwa, ọsụsọ, uwe elu, uwe ogologo ọkpa wdg.
Akpa ọdabara Akpa akpa
Obosara akwa Tupu mpịachi: 300 ~ 900mm
Mgbe mpịachi: 170 ~ 380mm
Ogologo uwe Tupu mpịachi: 400 ~ 1050mm
Mgbe mpịachi: 200 ~ 400mm
Oke nha akpa L*W: 280*200mm ~ 450*420mm
Ogo igwe na ibu ya L6900mm*W960mm*H1500mm; 500Kg
usoro ọrụ: Tinye aka na aka-> mpịachi akpaka-> akpa akpa-> ịdọka akpaka-> akara akpaka-> nchịkọta akpaka.
1. Ị nwere ike tinye nha nke uwe apịaji ozugbo wee jiri amamihe dozie obosara na ogologo nke apịaji.
2. Ị nwere ike họrọ ụzọ mpịachi dị iche iche iji gboo mkpa dị iche iche.
Ịdebe uwe aka ding mpịachi akpa abụọ n'akụkụ → nnyefe akpaka na ọdụ mpịachi → akpa akpa akpa mpịgharị transmission nnyefe n'ihu n'ihu fol mpịachi okpukpu abụọ transmission nnyefe akpaka na ọdụ akpa → akpa akpa → Nkwakọ ngwaahịa uwe emechara, nke ọzọ a na -emegharị uwe.
2-mpịachi aka nri na aka nri
Nke gara aga: Oké na mkpa uwe mpịachi igwe mbukota
Igwe Nwekọ Ngwa
Ngwa mbukota akwa
Uwe Ịkpakọba mbukota Machine
Ịkpakọba Cloth Machine
Ọrụ akụrụngwa ①. Ngwaọrụ a nwere ụdịdị FT-M112A bụ isi, nke enwere ike iji tụgharịa uwe aka ekpe na aka nri otu ugboro, tụgharịa ogologo oge otu ma ọ bụ ugboro abụọ, na-enye akpa rọba akpaka na akpaaka. . Enwere ike ịgbakwunye akụkụ arụ ọrụ dị ka ndị a: akụrụngwa njigide ọkụ na -akpaghị aka, akụrụngwa na -akpachi akpaaka akpaka, ihe nchịkọta akpaka.
Onye na -enyocha karama, Onye na -enyocha karama mmanya, Ngwa mbukota akwa, Onye na -enyocha karama, Igwe nyocha akara, Onye na -enyocha karama biya,